n 4 ndekọ
Cropping a video bụ ihe na nke onye ọrụ chọrọ na-òkè nke video na a chọrọ na ndị fọdụrụ na-tutu amama si ihuenyo. Echetakwa nke ọdịnaya na-adịghị mmasị site ọrụ bụ nanị kwe omume ma ọ bụrụ na cropping na-eme. Ọ bụ a onu na-adịghị nnọọ metụtara Mac dị ka ndị ọrụ ndị ọzọ na-eso ya na otu irè na nzube ya. QuickTime bụ software na e mepụtara maka Mac ma ọ na-akwado ndị ọzọ na nyiwe. Onye ọrụ nke ọ bụla OS ike ya mere zuru uru nke ọmụma na e kwuru ka n'okpuru.
Mkpa nke isiokwu
Ọtụtụ ijeri dollar nke revenue a na-site si YouTube na ndị ọzọ na video hosting saịtị na ọrụ na-agbalị ha larịị kasị mma na ndị kasị mma videos na-uploaded. Ọ bụ ezie na ụma ma mgbe ụfọdụ njirimara ọkọkpọhi akụkụ ụfọdụ nke video akpaghasị na chọrọ iji wepụ ha ozugbo na ihe niile mere na video na-enwe na kasị ukwuu na o kwere omume n'ụzọ. Nke a bụ ebe okwu ahụ cropping na-enyere ndị ọrụ na-needful mere na-enweghị atụ ụzọ. Nkà, ngwaọrụ na terminologies na-na-eji kwesịkwara ịbụ onye na-emezu ihe ndị a chọrọ nke onye ọrụ nakwa dị ka nke cropping echiche. Na i meghị otú ga-eduga results na ga-achọ re-cropping nke pụtara n'efu nke oge, ike na ego.
Otu na-emetụta video uploaders dị ka ọ bụrụ na ha na-eche na a ụfọdụ akụkụ nke video agaghị enwetaghị na-ege ntị nke ọma mgbe ahụ ka akụkụ bụ na-ewepụ ozugbo na ihe niile. Onye ọrụ kwesịrị ekwe nkwa na ihe omume na-eji bụ ndị zuru fledge arụmọrụ nke nke a na mfe nghọta, nke mere na ọ bụrụ na e a oge ọzọ onye ọrụ nwere ike iji otu usoro na-needful mere na ụdị na na klas. Na akụkụ ikpeazụ nke ndị nkuzi ga-ekpughe ihe nzuzo nke nile dị otú ahụ omume na ike ike iji mee ka ụfọdụ na ndị kasị mma na ala nke nkà pụta na-eme.
Play site iwu
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa akụkụ nke cropping a video na onye ọrụ kwesịkwara obi sie na ngwá ọrụ na-eji na video a ga-cropped na-etinyere na needful na-eme na ihe ndị kasị ọkachamara n'ụzọ. E nwere ọtụtụ iri puku ndị omume nke na-ekwe nkwa na onye ọrụ na-akawanye kasị ukwuu results ma usoro ihe omume nke na-eduzi onye ọrụ site na usoro bụ paramount onye na-na-eji ịdị ụfọdụ na kachanụ na kasị akpali akpali pụta na-emepụta na top n'ụzọ.
Wondershare Video Converter Ultimate for Mac Bụ omume na onye ọrụ kwesịrị iji na o nwere na-esonụ e ji mara:
The video edezi na akakabarede bụ ugboro 30 ngwa ngwa ka tụnyere omume nke yiri genre nke na-eme ya-enweghị atụ.
Ọ na-enyekwara dezie, akuku na-agbanwe 4K na àjà ihe ọṅụṅụ HD media nke bụ Kacha ọhụrụ technology nke e agbakwunyere.
Ọhụrụ atụmatụ nke usoro ihe omume nwere functionary ruo dezie video na ndị ọzọ na ihe onwunwe na-TV effortlessly na enyemaka nke a otu click. Ọ bụ a mma nke niile rivals enweghị.
Ọ bụ nanị Ntụgharị nke nwere DLNA nkwado wuru na-akwado yiri aga-eme.
E a media center na e agbakwunyere n'ime usoro ihe omume ọ na-eme ka o kwe onye ọrụ nyefee faịlụ ka otutu ngwaọrụ n'out oge iji unguided media.
N'akụkụ media, na Ntụgharị nwekwara ike tọghata image formats mere na ọ bụ usable site na ọrụ ndị na-achọ iji tọghata ọ bụla dị otú faịlụ na usoro dị mfe mejuputa.
1. Onye ọrụ kwesịrị ibudata, wụnye na-agba ọsọ ahụ omume:
2. Iji gaba na ziri ezi na "Tinye video" button bụ na-pịrị mere na usoro Ọganihu:
3. Iji emeghe edezi ngwá ọrụ onye ọrụ kwesịrị ka pịa edit button mere na a nzọụkwụ n'ihu ewerewo ya:
4. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị obi sie na ịgbanwe taabụ na-enwe dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru gaba n'ihu:
5. The akuku button bụ mgbe ahụ na-enwe maka usoro ọganihu:
6. The onye ọrụ nwere ike mgbe ahụ ịdọrọ rektangulu ka a mata na mpaghara nke a chọrọ iji cropped họrọ ahapụ ndị ọzọ:
7. Ozugbo cropping e mere ka kwa ọchịchọ mgbe ahụ onye ọrụ ahụ kwesịrị see OK bọtịnụ nke a ga-enwe na ala nri akuku ịrụcha usoro:
Iji MPEG Streamclip
MPEG Streamclip bụkwa otu n'ime karị mara converters iji jide n'aka na video cropping ma ọ bụ trimming na-eme na ihe ndị kasị magburu onwe n'ụzọ. Iji nweta kasị ukwuu nke si MPEG iyi clip onye ọrụ kwesịrị ka na-eso nzọụkwụ na e kwuru ka n'okpuru. Ndị a na-abụghị nanị mfe kamakwa ekwe ka onye ọrụ iji chọta N'ihi na akara na chọrọ:
1. Mgbe ịnweta usoro ihe omume ụzọ a ga-agbaso bụ File> Open Files:
2. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ka họrọ faịlụ a ga-cropped na-enwe ọganihu n'ihu:
3. The ọkpụkpọ isi bụ mgbe ahụ na-dọkpụụrụ ka chọrọ mgbe nke a ga-akpọ ka mmalite mgbe:
4. The ụzọ na a na-ahụ ga-esochi bụ Dezie> họrọ Na n'ihu n'ihu:
5. The ọkpụkpọ isi a na-ahụ ịbụ onye a kpaliri ọgwụgwụ isi na ụzọ na-mgbe ahụ a ga-agbaso bụ Dezie> Họrọ Ọ n'ihu n'ihu:
6. The mkpụbelata iwu a na-ahụ na-ahọrọ n'ime edit menu otu ugboro ọzọ nke mere na ihe ọ bụla tupu amalite na mgbe ọgwụgwụ mgbe na-tutu amama n'ụzọ zuru ezu:
7. Ozugbo video e trimmed ya nwere ike exported dị ka kwa ọchịchọ nke onye ọrụ na onye na format na a chọrọ:
> Resource> QuickTime> Olee otú ubi QuickTime video on Mac?